Mashruuc shaqo loogu abuurayo dhalinyarada oo Muqdisho ka furmay – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Aden Ibraahim Ferkeeti ayaa maanta daah furay Barnaamijka Tiir dhexaadka u ah Tayeeynta iyo Fursadaha Hay’adaha Dhaqaalaha. Somali Core Economic Institutions and Opportunities Project (SCORE) Mashruucaan ayaa waxaa maalgalinaya Bangiga Aduunka, wuxuuna si toos ah ula shaqaynayaa Wasaaradaha Ganacsiga, Dekedaha iyo Bangiga Dhexe kuwaas oo xiriir fiican la leh shirkadaha gaarka loo leeyahay (Privet Sector).
Mashruucaan daah furkiisa waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha, Wasiirka Dekedaha ee XFS iyo Wasiirka Maaliyadda dowlad goboleedka Puntland, wuxuuna socon doono mudo sadex sano ah, iyadoo uu ku kici doono aduun gaaraya 30 milyan oo doolar, waxaana si gaar ah loogu hormarinayaa shirkadaha gaarka loo leeyahay, wuxuuna gacan ka gaysan doonaa sidii loo abuuri lahaa jawi suura galin kara in shaqo loo abuuro dhalinyarada iyo haweenka.
“Waxaa ugu horeeya talaabooyinka mashruucaan qaadi doono in kor loo qaado Hay’adaha xariirka la leh ganacsiga gaarka loo leeyahay sida Wasaaradda Dekedaha, Wasaaradda Ganacsiga, iyo Bangiga Dhexe sidii loo hormarin lahaa howlaha ku aadan maamulka iyo maareynta. Iyadoona la soo saari doono lana dhaqan galin doono shuruuc dhiiri galin karta maalgashiga. Waxaa kale oo qayb ka ah mashruucaan in la taageero shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwaas oo awood u yeelan doona inay shaqooyin u abuuran shacabka Soomaaliyeed” ayuu yidhi Wasiir Farkeeti
Wasiirka oo sii wata hadalkiisa ayaa yidhi “Mashruucaan waxaa laga fulin doonaa dhamaan dalka, waxaana lagu bilaabayaa Puntland iyo magaalada Muqdisho, waxaana hormuud u ah fulintiisa Wasaaradda Maaliyadda XFS oo gacan ka helaysa Bangiga Aduunka, lacagta mashruucaan waxaa ku deeqay wadamada deeqada bixiya gaar ahaan wadamada ku bahoobay Midowga Yurub”